विश्वभर काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ९ लाख नाघ्याे, कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए ? - Mitho Khabar
September 11, 2020 mithokhabarLeaveaComment on विश्वभर काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ९ लाख नाघ्याे, कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए ?
काठमाडाैं, २५ भदाै । विश्वमा कोरोनाभाइरस अर्थात् कोभिड-१९ बाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ९ लाख नाघेकाे छ । विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म काेराेनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या ९ लाख ७ हजार ३०४ पुगेकाे छ ।
विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या भने दुई कराेड ८० लाख नाघेकाे छ । कुल सङ्क्रमितमध्ये दुई कराेड ९१ हजार बढी उपचारपछि घर फर्किएका छन् । पछिल्लाे २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर २ लाख ८६ हजार बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने ६ हजार २ सय २२ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । त्यस्तै २ लाख ७० हजार डिस्चार्ज भएका छन् ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा १ लाख ९५ हजार २३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितकाे संख्या भने ६५ लाख ४९ हजार ४७५ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ३८ लाख ४६ हजार ९५ जना भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ २५ लाख ८ हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये ११ हजार बढीकाे अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अहिलेसम्म भारतमा ४४ लाख ६२ हजार बढी संक्रमित भएका छन् । पछिल्लाे २४ घण्टाम मात्रै भारतमा ९५ हजार ५२९ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । काेराेनाका कारण ७५ हजार ९१ जनाकाे ज्यान गएकाे छ । संक्रमितमध्ये ३४ लाख ६९ हजार बढी पूर्ण रूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ९ लाख १८ हजार बढीमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ ।
अमेरिका र भारतपछि सबैभन्दा बढी संक्रमित हुनेमा ब्राजिल पर्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ काेराेनाबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ४१ लाख ९९ हजार ३३२ पुगेकाे छ भने काेराेनाका कारण मृत्यु हुेकाे संख्या १ लाख २८ हजार ६५३ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ३४ लाख ५३ हजार पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ६ लाख १७ हजार बढीकाे काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये ८ हजार ३१८ काे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
रूस अहिलेसम्म १० लाख ४१ हजार ७ मानिस काेराेनाबाट संक्रमित भएका छन् । काेराेनाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या भने १८ हजार १३५ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ८ लाख ५६ हजार बढी पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ १ लाख ६६ हजार बढीमा काेराेना संक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये २३ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
कालीमाटी क्षेत्रबाट वीर अस्पताल पुगेका थिए कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका मृतक